Ny hetsika ara-panatanjahantena tafahoatra tsara indrindra sy ny fifaninanana - ULLER
← Taloha / Manaraka →
Fantatry ny mpitia fitsangatsanganana fa fiankinan-doha fotsiny ny adrenaline. Ny fahazoana mametra ny fiainana amin'ny fanatanjahantena mampihetsi-po sy fanatanjahan-tena tafahoatra dia nanjary ampahany lehibe amin'ny fiainana andavanandron'ny mpitsangatsangana izay manazava amin'ny fotoana faran'izay henjana indrindra, indrindra rehefa mandray anjara amin'ny fifaninanana izay anehoany amintsika ny fahaizany sy ny talentany ankoatr'izay amin'ireo loza mety hitranga.
Inona avy ireo fifaninanana tena henjana indrindra?
The hetsika ara-panatanjahantena tafahoatra, festival ary fifaninanana milay be ry zareo! Betsaka ny zavatra eto amin'izao tontolo izao, manomboka amin'ny tsy fahita firy sy mamorona, hatrany amin'ny kilasika sy angano indrindra. Isaky ny amin'izy ireo isika dia afaka mahita maso ireo goavambe ara-panatanjahantena ary fampanantenana vaovao mifanatrika mihantsy ny herin'ny natiora, ny tampon'isa ambony indrindra, ny onja mahery setra indrindra, ary ny làlana lava indrindra sy mampidi-doza indrindra.
Fantatrao ve ny sasany amin'izy ireo? Vakio hatrany ary fantaro ny sasany amin'ireo hetsika, fety ary faran'izay tsara indrindra indrindra fifaninanana traikefa nahafinaritra an'izao tontolo izao!
NY X GAMES
Raha tianao ny fanatanjahan-tena tafahoatra sy ny freestyle, dia tsy isalasalana fa tianao ny X-Games tahaka antsika! Ity dragona amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena tafahoatra ity dia mampifangaro tsara ny filan'ny nofo, ny hetsika ary ny mozika, miaraka amina matihanina amin'ny fanatanjahantena manerantany amin'ny sokajy samihafa. Izany rehetra izany dia eo ambany fitarihan'ny vondrona ESPN, hatramin'ny niforonan'ny fifaninanana tamin'ny 1995.
Ahoana no fiasan'ny lalao X?
ny X Lalao tanterahina amin'ny fomba tena manokana izy ireo. Mandray anjara amin'ny alàlan'ny fandresena ny medaly volamena, volafotsy ary varahina, ary koa vola loka. Na izany aza, mifaninana indrindra amin'ny laza manaja ny ankamaroany izy ireo amin'ny fifaninanana malaza eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Araka ny hitantsika amin'ny Lalao Olaimpika, misy kinova roa amin'ny Lalao X: ny ririnina ary ny fahavaratra. Ao amin'ny repertoire an'ny fifaninanana amin'ny fahavaratra dia mahita Skate, BMX, motocross, freestyle, roller, rally, scooter (skateboarding) ary surf, ary hazakaza-moto. Ary amin'ny ririnina X-Lalao dia mifaninana amin'ny snowboarding, ski ary snowcross ianao.
Zavatra mahafinaritra hafa momba X Lalao dia ny hoe ny fanontana hafa dia tsy tazonina amin'ny toerana iray ihany, ary noho izany dia mazàna miorina amin'ny toerana samihafa eto ambonin'ny planeta, hatrany California ka hatrany Japon. Ankoatr'izay, ampiarahina amin'ilay festival malaza manolotra mozika mivantana izy io "X Fest" izay manolotra fotoam-pivoriana otrikaretina miaraka amin'ireo atleta sy hetsika hafa ho an'ny mpijery, mpankafy ary koa ireo mpifaninana.
NY PROFIDINA FARANY ABANCA GALICIA
Inona no atao hoe Pantin Classic?
Fantatra taloha tamin'ny anarana hoe "Pantin classic" na "Galicia Surf Pro", ny mpankafy Galicia Classic Surf Pro dia natao teny amin'ny morontsirak'i Pantín, Valdoviño (ao amin'ny faritanin'i A Coruña) ao anatin'ny faritra misy ny World Surf League (WSL).Any no mihaona mivantana sy mivantana mandritra ny fitsapana indroa QS 10.000 ny sangany amin'ny fivezivezena manerantany, izay milaza fa tompon-daka lehibe indrindra tamin'ny faritra eropeana iray manontolo.
El Abanca Galicia Classic Surf Pro,izay tato anatin'ny taona vitsivitsy dia niasa teo ambany fiahian'ny Praia de Pantín Club (manana an'i ABANCA ho mpanohana azy lehibe), manangona ny tsara indrindra amin'ny fivezivezena manerantany isan-taona mba hifaninana amin'ny hetsika amin'ny sokajy lehilahy sy vehivavy. Ireo surfera tsara indrindra eran-tany dia mitsidika ity toerana ity mba hifaninana sy hampiseho ny talentany rehetra.
Izy io dia iray amin'ireo fifaninanana fitsangatsangana an-tsehatra indrindra any Eropa, izay mandray olona maherin'ny 100.000 isan-taona ary manolotra sehatra fakan-tahaka izay mihodinkodina tanteraka amin'ny fivezivezena, manomboka amin'ny akanjo sy fivarotana entina fanaovana fanatanjahantena, hatrany amin'ireo fivarotana sakafo sy mozika. Ny tena marina dia mahafinaritra be ny hetsika rehetra ataon'izy ireo, satria lasa fifaninanana izany ary miaraka amin'ny fetibe, miaraka amin'ireo hetsi-panoherana anisan'izany ny batisan'izy ireo malaza.
Ny O Marisquiño dia iray amin'ny kolontsaina an-tanàn-dehibe manan-danja indrindra sy festival amin'ny fanatanjahantena any Eropa hatramin'ny namoronana azy tamin'ny taona 2001. Fetibe ivelany mandritra ny telo andro maimaim-poana izy io, izay olona mihoatra ny 160.000 no mankafy ny Fifaninanana ara-panatanjahantena tafahoatra folo, fampirantiana ara-kolontsaina, gastronomy tena tsara, fifaninanana dihy fitsaharana, fampisehoana zavakanto sy graffiti, kaonseritra ary maro hafa, ao amin'ny Port Maritime Port Vigo, akaikin'ny distrika manan-tantara ao an-tanàna.
Aiza i O Marisquiño nankalazaina?
Fetibe O Marisquiño dia miaina amin'ny faritra maherin'ny 150.000 metatra toradroa akaikin'ny manodidina manan-tantara an'i Vigo, izay anaovana fitsapana faran'izay mafy amin'ny fetibe, manoloana sy amoron-dranomasina, indrindra ao amin'ny Paseo de las Avenidas, ny Trasatlánticos Pier, ny Nautical ary ny Breakwater. Aseho ireo faritra isaky ny fampirantiana fanatanjahantena sy kolontsaina. Nanjary hetsika lehibe tao amin'ity tanàna ity izany!
El Na Marisquiño Izy io dia misy kaopy eran-tany 3, ny World Cup Skateboarding Street, ny World Cup Skateboarding Miniramp ary ny Dirt FMB World Tour, izay amboarina amin'ny fanasokajiana manerantany, ary izay fihaonan'ny atleta tsara indrindra, nasionaly sy iraisam-pirenena. Vao tsy ela akory izay, ny FIBA ​​3x3 Basket dia nampidirina ho isan'ny taranja ary nanao ny dingana tamin'ny sokajy Gold an'ny Dirt Jump izy ireo.
GRANDVALIRA MIADY TOTAL
Inona nyGrandvalira Total Fight?
Ny Grandvalira Total Fight dia iray amin'ireo fifaninanana snowboard sy freestyle malaza indrindra eto an-toerana sy iraisam-pirenena! A fifaninanana tafahoatra tena mahaliana satria ny talenta, ny tetika ary ny fomban'ireo mpifaninana no ifandroritana, amin'ny sokajy lahy sy vavy.
Ity fifaninanana snowboard Slopestyle sy freeski ity dia natao en The Snowpark El Tarter (iray amin'ireo Parks mpisava lalana any amin'ny Saikinosy) Noforonina tamin'ny 2005 ary nitombo be nanomboka tamin'izay. Raha ny marina, amin'ny andiany faharoa dia mahazo kintana 3 amin'ny kalandrie TTR (Ticket To Ride Tour), faribolana iray ao amin'ny snowboard iraisam-pirenena.
Fa io koa tamin'ny 2009 dia nanome kintana azy ny circuit TTR! Tamin'izany fotoana izany ireo kintana 4 dia niteraka fifaliana lehibe teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay nametraka ilay gara Grandvalira amin'ny sarintany. Izany rehetra izany dia nifanojo tamin'ny fahatongavan'ny maro mpitaingina miaraka amin'ny ambaratonga avo kokoa mankany an-toerana, izay te handray anjara.
Ny Grandvalira Total Fight, fifaninanana lalao malalaka lehibe indrindra tany atsimon'i Eropa, dia nahazo (tamin'ny 2013) ny kintana 5 tao amin'ny TTR circuit tamin'ny snowboard ary niditra tao amin'ny Sokajy volamena ao amin'ny tontolon'ny AFP, fanondroana iraisam-pirenena any freeski.
NY DAKAR RALOTRA
Lalan'i Dakar Rally: manao ahoana?
Tao anatin'izay am-polony taona lasa izay, ny rallye Dakar dia lasa iray amin'ireo fifaninanana fiara faran'izay mafy sy mampidi-doza tato ho ato. Antsoina hoe "Rally Paris-Dakar" taloha, fifaninanana fiara isan-taona any hetsi-panoherana, nokarakarain'ny ASO (Fikambanana Fanatanjahantena Amaury) nanomboka ny 26 Desambra 1978.
Rehefa nanomboka ny fifaninanana dia nanomboka tany Paris ny hazakazaka ary nahatratra 10.000 kilometatra lavitra kokoa, tao an-drenivohitr'i Senegal, any Afrika Andrefana. Na dia manomboka ao Buenos Aires (Arzantina) aza izy io, tamin'ny farany dia nambara fa hatao any Arabia Saodita any Moyen Orient miaraka amina dingana 2019, kilometatra 12 7800 kilometatra voafaritra ary maherin'ny XNUMXkm ny fitambarany. Nandritra ny taona maro, ny Dakar Rally dia nekena ho iray amin'ireo hazakazaka moto indrindra sy sarotra indrindra eran'izao tontolo izao, izay anehoan'ireo mpifaninana azy ny famporisihan'izy ireo, ny herim-po ary ny talenta ara-panatanjahantena eo amin'ireo tany sarotra indrindra eran'izao tontolo izao.
Mila fampidirana kely ny Ulta-Trail de Mont-Blanc! Ity hazakazaka marathon ultra malaza ity dia atao isan-taona any amin'ny Alpes, mandalo an'i Frantsa, Italia ary Suisse, izay misy mpifaninana mihoatra ny 10.000 mahatratra 172 km eo ho eo ary misy fahasamihafana manodidina ny 10.000 metatra. Mihaona ao Chamonix isan-taona ny elitika manerantany amin'ny làlana miaraka amin'ireo mpihazakazaka amateur hafa, mba hifaninana amin'ireo hazakazaka 7 amin'ilay hetsika.
Inona no mitovy amin'ny Montblanc UTMB Ultra Trail?
Amin'izao fotoana izao, ny UTMB dia fantatra amin'ny hazakazaka Run Running izay mitaky fitakiana be indrindra amin'ny rehetra ary koa malaza indrindra. Hazakazaka angano iray manontolo izay maneho traikefa tsy manam-paharoa! Ny marina dia ny manatevin-daharana Ity hazakazaka manodidina an'i Mont-Blanc ity dia, ambonin'izany rehetra izany, ny fanatsarana manokana izay avy any anaty, izay misy ezaka, fanoloran-tena ary fanamafisana mitarika azy ireo hiampita sy handresy ireo tampon-tampona tsara indrindra mandra-pahatongany any amin'ny tanjona farany. Hatreto dia ny rakitsoratr'i Montblac ultratrail dia notazomin'i Pau Capell, izay nandresy tamin'ny Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) tao anatin'ny 20 ora, 19 minitra ary fito segondra.
Fety iraisam-pirenena momba ny spaoro mahery vaika (FISE)
Ity angamba no fifaninanana ara-panatanjahantena tena lehibe indrindra eran'i Eropa rehetra! Janizy International Festival of Extreme Sports (FISE) no aseho ao afovoan-tanànan'i Montpellier, distrika Rives du Lez (France), be dia be atleta amin'ny sokajy Bmx, skate, roller, skateboard, motocross freestyle, awakeboard, slopestyle bisikileta, slackline ary bisikileta an-tendrombohitra. Iray amin'ireo hetsika tsy andoavam-bola tsara indrindra natao ho an'ireo tia ny fotoana mahaliana indrindra!
Ny rivotry ny fifaninanana dia tena mahafaly, fety ary voadidy adrenaline tanteraka, mahatratra 550.000 ny mpijery amin'ny traikefa 5 andro, izay atambatra amin'ny fomba tsy mampino ny fanatanjahan-tena tafahoatra, ny fety, ny gastronomie, ny atrikasa fahalalana. fanatanjahan-tena, kaonseritra ary fahafinaretana betsaka ho an'ireo tia fanatanjahantena tafahoatra sy fomba tsy andoavam-bola.
Ny FISEteraka tao Montpellier​ tany atsimon'i Frantsa tamin'ny 1997, ary avy eo, nanomboka tamin'ny 2014, nanomboka ny andian-tsarin'ny FISE, izay ny hetsika tsara indrindra tamin'ity tompon-daka ity dia nafindra tamin'ny toerana maro eto ambonin'ny planeta.
Inona ny zava-misy momba ny Jungle Marathon?
Anisan'ny hazakazaka faran'izay henjana sy sarotra indrindra, ny mitarika no mitarika anaty ala Marathon o Marathon Jungle.Fifaninanana natokana ho an'ny mpihazakazaka be herim-po ary tena mahavariana indrindra Nahoana? Eny, satria tsy marathon an'ireo mahazatra sy mahazatra izany. Ankalazaina indray mandeha isan-taona ao amin'ny Amazon of Brazil, toerana iray izay tena ahitana ny loza ateraky ny ala.
Ireo mpifaninana 75 amin'ny hazakazaka marathon dia miatrika mandritra ny fifaninanana amin'ny maripana ambony izay tsy midina ambanin'ny 40º miaraka amin'ny hamandoana 99%, izay ankoatry ny mamakivaky ny renirano miaraka amin'ireo alligators sy piranhas, ary miatrika zava-maniry maniry koa izay mamela hazavana kely dia kely hiditra, ary manafina biby mpampihorohoro minstrel izy, manomboka amin'ny bibilava ka hatrany amin'ny jaguars. Eny tafahoatra izany, sa tsy izany?
Ny Jungle Marathon, izay nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2003, dia nitazona fomba maodely telo: ny 42,2km no fanontana fohy indrindra, saingy azonao atao ihany koa ny manarona halavirana 127km mizara dingana 4. Ary avy eo, ny kinova lehibe indrindra dia misy làlana izay mandrakotra 254 km amin'ny fitambarany, ary ny fifandirana amin'ny dingana enina.
Amin'ity hazakazaka marathon adala ity, ny fahaizana ara-batana, ara-tsaina ary ara-pitondrantena dia tokony ho eo an-tampony mba hahatafavoaka velona amin'ity traikefa nahafinaritra ity amin'ny iray amin'ireo toerana voajanahary tsara indrindra misy, toy ny Amazon.
Ny zavatra tena mahaliana dia tsy misy làlana voafaritra ao amin'ilay zotra, fa raha marina fa miandry mpifaninana enina andro sarotra ireo mpifaninana mandra-pahatongany any amin'ny tanjona farany, izay tsy maintsy mividianan'izy ireo ny sakafony sy rano, Manamboara toeram-pialofana anao ary atreho ireo sakana rehetra miandry anao any anaty ala. Ho sahy handray anjara amin'ity fifaninanana tafahoatra ity ve ianao?
Inona ny atao hoe Sea Otter Classic?
Ahoana no tsy hilazana ny Sea Otter Classic! Iray amin'ireo fanatanjahan-tena tsara indrindra eto an-kalamanjana sy fetibe bisikileta eto amin'izao tontolo izao. Natao hatramin'ny taona 1991 tao amin'ny Fort Ord taloha any Monterey County, Kalifornia (Etazonia).
Ny hetsika dia antsoina hoe "Sea Otter Classic" ho fanomezam-boninahitra ny otter an-dranomasina, tompon-tany. Tamin'ny andiany voalohany, nandray ny atleta 350 sy mpijery 150 hafa indray ny festival. Mandray ireo atleta maherin'ny 9600 izy ankehitriny ary mihoatra ny 72.500 ny mpankafy izay mivory hijoro hahita ny tsara indrindra amin'ny bisikileta ary hankafy 4 andro feno fientanentanana amin'ny fetiben'ny bisikileta lehibe manerantany.
Tamin'ny 1991 ka hatramin'ny 2002, ny Sea Otter Classic dia nitranga nandritra ny volana martsa, fa avy eo tamin'ny 2003 dia namindra ny datiny tamin'ny aprily mba hanararaotra ny toetrandro kalifornia malefaka kokoa.
Inona ny atao hoe Sea Otter Europe Bike Show Giron?
Misy ihany koa ny Sea Otter Europe Bike Show any Girona - Costa Brava any Eropa. Hatramin'ny taona 2017 dia niainga izy ary nalaina avy tamin'ny Sea Otter Classic. Izy io angamba no tsara indrindra sy manan-danja indrindra amin'ny fetibe bisikileta any Eropa ho an'ny tanora manan-talenta sy matihanina efa miorina amin'ny fanatanjahantena.
Inona ny atao hoe Marovo'i Barkley?
Mety tsy dia nahare firy momba ity fifaninanana fitsangatsanganana hafahafa sy mahaliana ity ianao, fa ny Barkley Marathon dia azo antoka fa iray amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena faran'izay mafy, mitaky be sy miafina amin'ny olona rehetra manerantany! Tao anatin'ny tantaran'ny hazakazaka marathon dia olona 15 monja no nahavita nahavita ny diany mampidi-doza sy sarotra.
Natomboka tamin'ny taona 1986 ny mpamorona azy Gary "Laz" Cantrell, fantatra amin'ny anarana hoe "Lake Lazarus". Hazakazaka lavitra be lavitra izay mihoatra ny kanôna mahazatra an'ny marathon, lasa hetsika fiaretana henjana indrindra sy mafy indrindra eto an-tany.
Mety efa noheverinao fa tsy hazakazaka mahazatra akory izy io, ary raha ny tena izy dia hafahafa ihany, voalohany satria ny fisoratany dia dingana miafina sy sarotra: amin'ny alàlan'ny mailaka fotsiny amin'ny fotoana sy daty marina an'ny namorona azy (nanazava ny antony manosika sy fandaharam-pampianarana fahaiza-manao) mety tsy hahazoanao fotoana mety ho iray amin'ireo mpihazakazaka 40 mandray anjara amin'ny hafahafa Marathon Barkley. Ho fanampin'izany, dia amin'ny daty fiantsoana miafina, amin'ny toerana tsy fantatra any amin'ny fanjakan'i Tennessee, Etazonia.
Fa maninona no sarotra ny fanaovana Barkley Marathon?
Ny tanjon'ny Marathon Barkley dia ny handrakotra 160 kilometatra tanteraka miaraka amina fidinana mitsivalana mihoatra ny 20.000 60 metatra amin'ny fe-potoana 5 ora. Ny fifaninanana dia misy sombin-tsambo sambo XNUMX malalaka, izay ny halavirana no kely indrindra. Ny ampahany tena faran'izay mafy dia avy amin'ny tsy fitoviana, ny filana ny fivezivezena tsara sy ny toerana eny amin'ny habakabaka, ary ny toe-javatra tsy fantatra izay hidiran'ny mpifaninana, satria tsy fantany hoe manao ahoana ny toerana misy azy ireo sy ny toetr'andro mety hiainany.
Ny tena mahaliana sy manintona indrindra amin'ity fifaninanana ity dia ny tandindon'ny fiainana sy ny fisiana. Ary ankoatr'izay, raha mandeha amin'ny làlana ianao dia tsy maintsy mahita ny tenanao eny amin'ny habakabaka mba hanangonana pejy misy boky 14 miafina ao amin'ilay toerana, ary tokony hanomboka sy hanolotra ireo mpifaninana ho porofo fa tena nahavita ny lalana marina izy ireo. Mahaliana be sa?
Raha tsy misy ny famatsiana mialoha, na fanampiana isan-karazany, ary tsy misy toeram-pisavana, ireo mpihazakazaka efapolo dia miroso amin'ny natiora miaraka aminy bib, kompas ary mijery tsy misy GPS.Io ihany no zavatra azony avy amin'ny fikambanana alohan'ny hanombohany.
Barkley Marathon Netflix Fanadihadiana fanadihadiana
Su nitombo ny lazany tato anatin'ny taona vitsy lasa, indrindra taorian'ny fanombohan'ny 2014 ny Ilay hazakazaka mazàna (Ilay hazakazaka amina tanora), ilay horonantsary fanadihadiana Netflix izay mamakafaka sy mampiseho an'ity fifaninanana hafahafa sy henjana ity. Ho sahy handefa mailaka amin'ny Farihin'i Lazarus ve ianao?
Mifanentana amin'ny fifaninanana sy hetsika goavana toy ny ataontsika ve ianao? Lazao anay izay tianao indrindra!
Mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka eny amin'ny tehezan'i Colorado ary mahatsapa ny rivotra madio rehefa manao ski amin'ny lemaka tsy mampino izy dia tsy mitovy. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny traikefa ski any Colorado? Eny